Maitiro ekushandura PDF kuita EPUB ine Caliber | Linux Vakapindwa muropa
Nhasi uno zvakajairika kana uchiverenga kushandisa iyo maebook, mabhuku mumhando yemagetsi ayo anga ari mutengesi ari nani pane akadhindwa mabhuku kwenguva yakati. Izvi ndezvokutenda kubhenefiti yakakura yekutakurika, sezvo tichigona kuenda navo pane chero chishandiso, kunyangwe sezvazvinowanzoitika tiine mafomati akasiyana erudzi urwu rwezviri mukati uye pane nguva dzatinofanira kuchinjika kubva kune mumwe tichienda kune mumwe.
Yekutanga yemagetsi fomati yekuwana kugamuchirwa kwepasirese yaive PDF, kunyangwe iyo EPUB fomati inopa zvirinani maficha sezvo saizi yefonti uye kumahombekombe zvinogona kuchinjiswa kuti zvienderane nekuverenga kune zvatinofarira, uye saka dzimwe nguva tinozviwana tiri mukuda kwekuita shanduko. Ngatione ipapo maitiro ekushandura iyo PDF kuita EPUB yekutenda kuCaliber, yakavhurika sosi yekuverenga chishandiso inowanikwa paLinux.
Nhanho yekutanga ndeyechokwadi dhawunirodha uye gadza Caliber , izvo zvatingaite kubva kune yayo yepamutemo peji kana kushandisa maneja wepakeji kuti yedu distro de Linux tipe isu. Ipapo tinofanira wedzera maPDF atinozo shandura, chimwe chinhu chatinoita nekudzvanya pabhatani 'Wedzera mabhuku' (yekutanga kuruboshwe nebhuku dzvuku uye '+' chikwangwani) uye wosarudza vese vanotifarira pane izvi.
Ipapo isu tinofanirwa kubaya pane bhatani 'Chinja mabhuku' iyo inovhura iyo sarudzo hwindo pamberi pedu. Kwete kutya kuti kune akawanda, asi zvakanyanyisa isu tinofanirwa kuziva kuti chakakosha chinhu chekupinza uye chekubuda fomati sarudzo, chii chinofanirwa kusimbiswa muPDF uye EPUB zvichiteerana.
Kana isu tikabaya pane bhatani 'Kubvuma' (pazasi kurudyi) inotanga shanduko, iyo isingatore anopfuura maminetsi akati wandei, maitiro ane zvakare kuwedzera kunonakidza kwebara yekufambira iyo ichatibvumira kuziva kuti zvinotora nguva yakareba sei kupedzisa basa iri. Kana izvo zvikaitika isu tichava nezviri mukati zviripo izvozvi mune ese mafomati, PDF uye ePub.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Maitiro ekushandura PDF kuita EPUB ine Caliber
Iko kushandurwa kunosiya zvakanyanya kudikanwa, nekuti hazvichengete mafomati ePDP zvinyorwa. inorasikirwa nereferenzi yemapeji, ine akawanda asina basa mitsara inotsemuka ... ini handisati ndawana nzira yekuishandura kuita fomati inogona kuverenga nyore.